Saaxiibada Soomaaliya oo soo dhaweeyay wada-hadalka u dhexeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSaaxiibada Soomaaliya oo soo dhaweeyay wada-hadalka u dhexeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka
September 15, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Calamada saaxiibada caalamka ee Soomaaliya.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Saaxiibada Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay wada-hadalka u dhexeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka, sida lagu sheegay war-saxaafadeed soo baxay gelinkii dambe ee Isniinta.
“Saaxiibadu waxay ku boorrinayaan Madaxda Soomaaliyeed inay si buuxda uga wada qayb-qaataan wadahadal dhab ah oo ujeeddadiisu tahay in heshiis ballaaran laga gaaro hanaan doorasho oo lagu kalsoonaan karo lana hirgelin karo. Saaxiibadu waxay rajeynayaan in saamilayda siyaasadeed ee kale ee Soomaaliyeed ee muhiimka ah sidoo kale lala tashan doono, inta wadahadalladu horay usii siqayaan, si loo ballaariyo taageerada loo hayo heshiiska iyo hirgelintiisaba.” Aayaa lagi yiri war-saxaafadeedka.
Masuuliyiinta Soomaaliya oo kulan looga hadlayo doorashada uga furmay Muqdisho
Duqa Garoowe Xasan Goodir oo sheegay in bilowga 2017 buundo la saari doono wadada isku xirta isbitaalka iyo magaalada
Garoowe-(Puntland Mirror) Duqa degmada Garoowe Xasan Maxamed Ciise “Goodir” ayaa sheegay in Bangida Aduunka uu mashaariic kaabayaasha dhaqaalaha ah ka fulinayo magaalada Garoowe ee caasimada Puntland. Goodir oo wareysi siiyay website-ka la yiraahdo Raxanreeb ayaa [...]